ပြည်သစ်ညွန့်ဝေခေါ်မောင်မောင်လို့လူသိများတဲ့ ဦးမောင်မောင်ဟာ သူ့ရဲ့ ငုတ်ဗီဇခဏတာပဲ ထိန်းချုပ်လို့ရပြီး မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ့ပတ်တဲ့အကျင့် မင်းသားကြီးမလုပ်ရလို့ပတ်မကြီးထိုးဖောက်တဲ့အကျင့် သစ်ကုလားအုပ်လိုနေရာတဆင့်ခြင်း အရယူဖို့ တိုးဝင်ဖယ်ထုတ်တတ်တဲ့အကျင့်ကပြန်ပေါ်လာပြီ
လိုချင်တဲ့နေရာမရတဲ့အခါ တော်လှန်ရေးကာလ ခက်ခက်ခဲခဲဦးဆောင်နေရတဲ့ NUG နဲ့ဝန်ကြီးတွေကို တွန်းထိုးတိုက်ထုတ်မှုတွေဆက်တိုက်လုပ်လာပါတယ်ဦးမောင်မောင်က သူပရော့ဂျက်တွေ proposal တွေကို အရင်တင်လေ့ရှိပြီး သူလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကို NUCC ကတဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအရယူဖို့ အလုပ်သမားအဖွဲ့တွေအားကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်
သူ့ပရော့ဂျက်ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အလုံးစုံစီးပွါးရေးပိတ်ဆို့နိုင်ဖို့NUG ကသူ့သဘောအတိုင်းမဖြစ်မနေလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားတွေတွန်းတင်လာတယ်..
NUG က မူဝါဒနဲ့အညီဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက် အလုံးစုံ အတွက်ထက်တဆင့်ခြင်း သွားဖို့သာလက်ရှိအခြေအနေမှာ သဘောထား ရှိပါတယ်..
ဦးမောင်မောင်အနေနဲ့သူသဘောနဲ့ထပ်တူမကျရကောင်းလားဆိုပြီး NUG ဝန်ကြီးတွေအပါအဝင် ဆရာကြီးDrZWSကိုပါ တိုက်ခိုက်လာတာ တွေ့ကြကြားကြပါလိမ့်မယ်
ဒီကိစ္စ သာမာန်ကြည့်ရင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအမည်ခံဦးမောင်မောင်ဖန်တီးထားတဲ့အမည်ခံ အဖွဲ့တာဝန်ရှိ အမျိုးသမီးကပဲVideo ရိုက်လွှင့် စာတွေရေးတင်နေတယ်လို့မြင်ရပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ ဝန်ကြီးတွေအပေါ်ရိုင်းပြတဲ့ အပြုအမူအပြောအဆိုအမူအယာတွေနဲ့ အနှောက်အယှက်ပေးလာကြတာပါ
ဦးမောင်မောင်ကိုယ်စားပြောဆိုပေးနေသူ ဒေါ်ခိုင်ဇာအောင်ဆိုတာလည် မဲဆောက်မှာ ဦးမောင်မောင်မွေးထားပြီး မြန်မာပြည်ကိုအတူပြန်လာတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ပါတယ်
ဒီကလေးမတွေ လာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံပုံတွေနားထောင်ရတဲ့အခါ ဦးမောင်မောင်နဲ့ သူတို့ Backgroundကို မဖြစ်မနေ ပြန်ထောက်ပြသတိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက် ပြောရပါလိမ့်မယ်
ကျနော်တို့က ဦးမောင်မောင်ဟာ ဒီတော်လှန်ရေးမှာရော အရင့်အရင်လိုပဲ စစ်အုပ်စုရဲ့ ( ပွန်း )ဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြန်သတိထားကြည့်နိုင်အောင် အစပြန်ထုတ်ပြရတော့မဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်
ဒါ ဦးမောင်မောင် က ခိုင်ဇာအောင်နဲ့အလုပ်သမားအဖွဲ့တွေကိုမြောက်ပင့်ပြီး.. Dr ဇော်ဝေစိုး ပြောဆိုတင်ပြမှုတွေကို.. စော်ကားလိုက်တဲ့အတွက်...ဘယ်သူမပြု ဦးမောင်မောင်အမှုပဲလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်
ဦးမောင်မောင်ဟာ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းတောခိုလာပြီး FTUB အလုပ်သမား သမဂ္ဂ ခေါင်းစဥ်တပ်ငွေရှာ NCGUB ဒေါက်တာစိန်ဝင်းအစိုးရကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သူဖြစ်သလို ဖရိုမန်းရှာလာဘန်းလိုတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းကိုလည်းရန်ရှာအားပြိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာတော်လှန်ရေးအင်အားစုအများသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်
NCGUB ဖွဲ့တဲ့အခါမှာလည်း သူရှာနိုင်တဲ့ငွေအင်အားနဲ့ အမတ်ဝယ်သူအဖြစ်နာမည်ကြီးခဲ့သူဖြစ်တယ်.. အမှန်တကယ်သူဝယ်တာခံရတဲ့အမတ်တွေလည်းရှိခဲ့တယ် သူခိုင်းတာလုပ်ပေးကြရတယ်.
ပရော့ဂျက်တွေမျိူးစုံတင်တက်တဲ့ဦးမောင်မောင်ဟာ NLDထဲကပြင်ပ မဲဆောက်ရောက်
လာသူအချို့ကိုအသုံးချပြီး UG အသွင်သဏ္ဍာန်သင်တန်းပေးဟန်နဲ့ နအဖ နဲ့လက်ဝါးချင်းရိုက်အမှုတွေဂွင်ဆင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တယ်
အလုပ်သမားရေးတက်ကျွမ်းလာပြီးနောက် အလုပ်သမားခေါင်းစဥ်ကိုအသုံးချ နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်.
ကမ္ဘာ ့အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ကိုအကျွမ်းတဝင်ဆက်ဆံနိုင်သူဖြစ်လာပြီး အဲဒီ့ ILOခေါင်းစဥ်အောက်ကနေပြီး တစ် ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ် သူ့အဖေ NLD CEC အမည်နဲ့ ကောင်းကောင်းကြီးငွေလိမ်တောင်းခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ..
ဒါ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုအသုံးချပြီး NCGUB မှာချယ်လှယ်ချင်တိုင်းချယ်လှယ်တဲ့အတွက် ကျောင်းသားအင်အားစုက ဦးမောင်မောင်နဲ့ဆိုအကင်းဆုံးနေခဲ့ကြတယ်
ဒါ ဦးမောင်မောင်ပြည်ပ ရှိစဥ်တစိတ်တပိုင်းလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။
ဦးမောင်မောင် နအဖ နဲ့ချိတ်ဆက်အပေးအယူအသွားအလာလုပ်တဲ့ ကိစ္စ ကိုသူ့ FTUB ရဲ့အတွင်းရေးမှုးတစ်ယောက်က ဖော်ထုတ်လိုက်တာလည်းကြားမိကြပါလိမ့်မယ်။
ဦးမောင်မောင်မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ချည်းကပ်ပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူမပါတီက သူတို့အမည်အသုံးချပြီး ဦးမောင်မောင်ငွေရှာခဲ့တဲ့အတွက် လုံးဝ လက်ခံဆက်ဆံခြင်းမပြုခဲ့ပါ။
ခွေးတိုးပေါက်မျိုးစုံကနောက်ဖေးပေါက်မျိုးစုံက ဝင်ခဲ့သလို ငွေနှင့်စည်းရုံးနိုင်မည်ထင်သောသူများကို ခိုးတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါတီတွင်းမှာတော့တရားဝင်ဆက်ဆံခံရတယ်လို့မကြားခဲ့ပါ။
ကိုဗစ်အရေးပေါ်ကာလ တွင်း၌သာ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဦးမောင်မောင်ကို အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန USDP ဝန်ကြီးဌာနဖက်က နညမည်တင်သွင်းတာကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် video conference ဖြင့် စကားပြောခွင့်တစ်ခါသာရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ဒါလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အလုပ်သဘောထိတွေ့မေးမြန်းရုံပါ.
မြန်မာပြည်ထဲပြန်ဝင်လာပြီး USDP အစိုးရအာဏာကိုလည်းချည်းကပ်ခဲ့သူ့ဖြစ်တယ်..ဝန်ကြီးဟောင်း အောင်မင်းစိုးသိမ်းတို့နဲ့လစဥ်တွေ့ဆုံပြီးအလုပ်သမားခေါင်းစဥ်နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားရေးရာ ကိစ္စ တွေဆွေးနွေးအစည်းအဝေးတက်လေ့ရှိပြီး USDPအားချည်းကပ်ကာ အလုပ်သမားအနည်းငယ်လယ်သမားအများစုပါဝင်သည့် CTUM ကို အဖွဲ့ချုပ်ကြီးအဖြစ်မှတ်ပုံတင်အရယူခဲ့ပါတယ်။
ဒီလုပ်ရပ်ကို ဦးသိန်းစိန်အကြံပေးထဲကဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်..ယခု ဦးမောင်မောင် အသူံးချပြနေတဲ့အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်ဟာအလုပ်သမားလယ်သမားမှတ်ပုံတင်ပြီးသားအဖွဲ့လေးတွေကို တစ်ဖွဲ့ ကျပ်ငွေ နှစ်သိန်းနဲ့ မှတ်ပုံတင်ကျပြီးသားစာရွက်များကိုဝယ်ယူပြီး အဖွဲ့ချုပ်အမည်ခံအရယူသွားတာဖြစ်တယ် .
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီက အဆက်အဆံမလုပ်တဲ့အတွက် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့လက်ဝါးရိုက်ပြီးအရယူသွားတဲ့အဖွဲ့ချုပ်အမည်ခံသာဖြစ်တယ်
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ဦးမောင်မောင်ကဦးဆောင်ပြီအလုပ်သမား သမဂ္ဂ ထဲက တစ်သီးပုဂလအမတ်စာရင်းတင်သွင်းကာ NLD ကိုဝင်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ် မယှဥ်ပြိုင်စဥ်မှာ လှိုင်သာယာကနောင်ခန်းမတွင် ကြံ့ခိုငိရေးအမတ်ပြည်ထောင်စုအလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ မှ ဦးမောင်မောင်၏ အလုပ်သမားတစ်သီးပုဂ္ဂလများအတွက်ထောက်ခံမဲဆွယ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်... ၁%ပင်မဲမရရှိခဲ့ပါ။
ယခုအာဏာလုပြီးးနောက်ပိုင်းတွင် သုံးပွင့်ဆိုင်အား ရပ်တန့်မည်ဟူသောစကားရပ်ဖြင့် ေတာ်လှန်ရေးထဲပါလာသော်လည်း.. NUG အလုပ်သမားဝန်ကြီးဖြစ်ရရေး
အပတ်တကုတ်ကြိုးစားရင်း မရတော့သည့် ယနေ့အခြေအနေတွင် ၎င်းဦးဆောင်မှုအောက်တွင်ရောက်နေသော သူများမှ NUG အားအနှောက်အယှက်ပေးလာသည်ကိုကြားသိလာရသည်
ကျနော်တို့အနေနဲ့ ယခု တော်လှန်ရေးကာလအလုံးစုံညီညွတ်ခြင်းကိုလိုလားသော်လည်းစစ်အာဏာရှင်အားအမြှစ်ဖြတ်ရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ အလုပ်သမားမျာအမည်အသုံးချ၍ လူတစ်စုကောင်းစားရေး ခြေလှမ်းစနေတဲ့ ယခုကဲ့သို့ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များကိုပါအလုပ်ဖင့်စေရန် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ရန်တိုက်ပြီးဖျက်လိုဖျက်ဆီးစော်ကားရမ်းကားနေသောဦးမောင်မောင်နှင့်အလိုတူအလိုပါများကိုပါရှင်းလင်းသည့်ဆက်ဆံရေးတစ်ရပ်ဆောင်ရွက်သင့်ပြီ...
အမှန်တကယ်အလုပ်သမားအစစ်အမှန်ဆောင်ရွက်သူ တတ်သိနားလည်သူများသည်လည်းဦးမောင်မောင်စေခိုင်းသည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်သောကြောင့်၎င်းနှင်အတူတကွနေထိုင်သူ အမျိုးသမီးရွယ်နှစ်ဦးကိုသာလက်စွဲထား၍ ခိုင်းစေပြောဆိုစေရန်စေခိုင်းနိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်
ဦးမောင်မောင်၏ စည်းရုံးစွဲဆောင်မှုထဲတွင်ပါဝင်သူအများစုမှာ ဘဝအခြေအနေမဲ့သူများ.နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများတွင် ဝင်ဆန့်ချင်သူများ အလုပ်သမားရေး ဃ ဃ ဏ ဏ နားမလည်းမတတ်ကျွမ်းသူများ စားဝတ်နေရေးအတွက်အဖွဲ့ဖွဲ့ရပ်တည်နေရသူများ ဦးမောင်မောင်၏ နောက်ခံသမိုင်းဆိုးအားသေသေချာချာမသိနားမလည်သူများ အများစုဖြစ်သည်။
အလုပ်သမားအစစ်တော်လှန်ရေးသမားအမှန်အကန်ဆိုလျှင် ဘာသာစကားတတ်ကျွမ်းမှုကိုအသာစီးယူ၍ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထံ လိမ်လည်လှည့်ဖျားလုပ်စားနေသည့်၎င်းတို့လူတစု၏ လက်အောက်ခံအဖြစ် မဖြစ်သင့်ပေ။
ဧရာဝတီသတင်းတွင် စီးပွါးရေးပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာရေးသားထားသောဆောင်းပါးသည်လည်းဦးမောင်မောင်၏ရေးသားပေးချက်ဖြစ်ပြီးအလုပ်သမားအမည်ခံမိန်းခလေးမှာ ဦးမောင်မောင်လက်စွဲ နှစ်ဦးတည်းသော မိန်းမငယ်၏ညီမရင်းဖြစ်သည်။
.ယခုဆိုလျှင် ဆရာကြီး DrZWS၏ မိန့်မြွက်ချက်များကိုကောက်နုတ်၍ လှောင်ပြောင်သရော်ထိပါးလာခြင်းကြောင့် CTUM ...နှင့်ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းတို့အား NUG ၏ နယ်နမိတ်အတွင်းစည်းခြားဆက်ဆံရန်အထူးရေးကြီးပါတယ်
ဦးမောင်မောင်ဟာ၄င်းပရော့ဂျက်အောင်မြင်ရန် ၎င်းကိုယ်ကျိုးစီးပွားငွေရှာလွယ်ရန် မည်သူ့အသက်မည်သူဘဝ စတေးရ စတေးရ ဝန်မလေးသူဖြစ်ပါတယ်
CDM အတွက် ဥရောပအထောက်အပံ့ ကိုတဆင့်ခံပံ့ပိုးပြီး ၎င်းကကျေးဇူးရှင်သဖွယ် ဝန်ကြီးနေရာတောင်းသဖြင့် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများမှဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြရပါတယ်
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအမှီပြုပြီး NUG အစိုးရရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လွှမ်းမိုးဥဦးစီးချင်လာတဲ့အပြင် ၎င်းမလိုလားသော တာဝန်ရှိသူတွေကိုဖယ်ထုတ်ဖို့နည်းပေါင်းစုံနဲ့ တိုက်ထုတ်နေတဲ့အပြင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပါ သတင်းအမှားတွေပေးပို့ပြီးဖြတ်တောက်နေပါတယ်
၂၀၁၃မှ၂၀၂၁နှစ်စပိုင်းအထိ ဦးမောင်မောင်ဟာ USDP နဲ့သာအဆင်ပြေတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီး..လွှတ်တော်တွင်းအလုပ်သမားဥပဒေပြုမှုများရံဖန်ရံခါချဉ်းကပ်လာပေမဲ့ NLD ကိုစဉ်ဆက်မပျက်အတိုက်အခံပြုလုပ်လာသူဖြစ်ပါတယ်
ယခုအခြေအနေကိုကြည့်ရင် Drzwsတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြောဆိုပြီး စစ်တပ်ကို ပြန်လည်မျက်နှာချိုသွေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ် အရင်ကတည်းက သပ်လျိုပါဝင်လာနိုင်သည်ကိုလည် သတိထားသုံးသပ်သင်တယ်
နောက်ဆက်တွဲ ကိစ္စ တစ်ရပ်မှာ..မန်းလေးတွင် သမဂ္ဂ ဥဦးဆောင်တစ်ယောက်ကိုလဲ ၄င်းကိုNUG ရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးအဖြစ်မရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်စကစနှင့် ပေါင်မယ်လို့ လူသိရှင်ကြားကြိမ်းဝါးခဲ့တဲ့နောက် ထိုလူရွယ် အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ဦးဆောင်သူ
ကြောင့် မန်လေးတွင် အဖမ်းအဆီးခံရမှု တွေတည်နေရာကိုအဝိုင်းခံရမှုတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ထိုလူရွယ်ကို ဒလံအဖြစ်သတင်းထွက်သွားချိန်တွင်လူရွယ် ထောင်ထဲရောက်သွားကြောင်း သတင်းဖြန့်ခဲ့တယ် အခုချိန်ထိ ထောင်ထဲမှာလားအပြင်လောကမှာလား အဖြေမရှိပဲ ထိုလူရွယ်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ် ၎င်းလူရွယ်နှင်ပတ်သတ်မှုရှိခဲ့တဲ့ သမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးအမျိုးသားတချို့ ထိုလူရွယ်၏ရန်ကြောက်လှန့်၍တောခိုလိုက်ကြရတယ်
၎င်း ကိစ္စ ဖောက်ပြန်သွားတဲ့ လူရွယ်ဘက်က ဦးမောင်မောင်နှင့်၎င်းလက်အောက်ခံတစ်ချို့က​အကာအကွယ်ပေးပြောဆိုနေတာတွေရှိတယ်
တော်လှန်ရေးအရေးကြီးဆုံးကာလဖြစ်တဲ့အတွက် ဦးမောင်မောင်အနေနဲ့ ကိုယ်လုပ်ချင်ကိုယ်ချုပ်ကိုင်ချင်တဲ့အခြေအနေတွေ ရမလာတိုင်း ခြိမ်းခြောက်သည့်အသွင် ပြုမူနေခြင်း
အောက်ခြေ သမဂ္ဂ နှင့်အလုပ်သမားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုမြှောက်ပင့်အသုံးချပြီး ယခုပြုမူနေမှုများချက်ချင်းရပ်ပါ..အပြည်ပြည်ဆိုင်ရ အဖွဲ့အစည်းများ အားကိုယူကာ NUG အစိုးရ ဝန်ကြီးများအားဖိအားပေးနေခြင်း ချက်ချင်းရပ်ပါ ။
ဒေါ်ခိုင်ဇာအောင် အပါအဝင် NUG အား ထိပ်တိုက် ထိပါးနေသူများအား လက်ပိုက်ကြည့်နေမည်မဟုတ်... မရပ်တန့်လျှင် သင်တို့အကြောင်းအရာများအား ပြည်သူသိသာစေရန်အသေးစိတ်ထပ်မံကြေညာသွားမည်ဟုဖေါ်ပြ
BY YeYint Nge ... 11/17/2021